OMN- Oduu Aanaa Saasiggaa – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooOMN- Oduu Aanaa Saasiggaa
Waraanni Bilisummaa Oromoo Godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Saasiggaatti Kibxata kaleessaa ganamarraa eegalee humnoota sirna aangoorra jiru tiksan irratti haleellaa jabaa raawwataa jiraachuu ibse.
Haleellaa humnoota kanneen irratti raawwatame hordofee, waraanni bilisummaa Oromoo hidhamtoota siyaasaa 100 caalan hidhaatii gadi lakkisuu himan Dubbi Himaan Idil-addunyaa Waraana Bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii.
Haleellaa WBO’n raawwachuusaa ibse kana ilaalchisuun gama sirna aangoorra jiruutiin hanga oduun kun qindaa’etti wanti jedhame jiraachuu baatus, Waraanni Bilisummaa Oromoo Aanaa Saasiggaafi naannoo isheetti tarkaanfii fudhachuun qabatamaadha jedhu jiraattonni naannoo.
Waraanni Bilisummaa Oromoo Duula Xumura Gabrummaa torban sadii dura maqaa qabsaa’ota Oromoo gameeyyiitti moggaasuun labseen Godinaalee Lixa, Giddugalaafi Kibba Oromiyaatti sochii waraanaa jajjabaa taasisuun iddoowwan hedduu to’achuu ibsaa tureera.
Gama Lixaatiin Duula Bobbaa Laggasaa Wagiitti kan jiru waraanni kun, Godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Saasiggaatti Kibxata kaleessaa ganamarraa eegaluun humnoota mootummaa irratti haleellaa raawwataa turuu ibse.
Waraanni Bilisummaa Oromoo Kibxata Ganama Buufata Poolisii Aanaa Saasiggaa irratti haleellaa raawwachuu ibsan dubbi himaan idil-addunyaa Waraana Bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii. Haleellaa kana hordofuun waraana mootummaa konkolaataa Pick-up 3’n magaalaa Ukkeerraa birmannaaf dhufes bakka Owwaataa jedhamutti barbadeessuu beeksisan. Humni mootummaa dabalataan magaalaa Angar Guutee jedhamurraa konkolaataa 3F’n birmannaaf dhufes iddoo Afata (Mandara 6) jedhamutti guutummaatti barbadaa’uu ibsaniiru.
Kibxata waaree booda ammoo humnoonni mootummaa guutummaatti Aanaa Saasiggaa gadi lakkisanii ba’uuf dirqamuu kan ibsan Odaa Tarbii, Kantiibaa magaalaa Gannatii Taayyee fi Itti Gaafatamaa Waajjira Nageenyaa Dassaalany Ebiyo dabalatee Kaabinoonni Aanichaa gara Naqamteetti baqachuus ibsan.
Kibxata waaree booda naannoo sa’a 10:30tti waraanni mootummaa konkolaattota 3F sadii fi Oraalii tokkoon dhufuun haleellaa Waraana Bilisummaa Oromoo qolachuuf yaalanis bakka Mandara 3 jedhamutti guutummaatti barbadaa’aniiru jedhan.
Waraanni Bilisummaa Oromoo humnoota sirna aangoorra jiru tiksan irratti haleellaa Kibxata raawwateen miidhaa cimaa geessisuu, hedduun dhumuufi, kan lubbuun hafan wal’aansaaf Hospitaala Yuniversitii Wallaggaatti guuramuun ibsameera. Kana malees Hidhamtoota Siyaasaa 100 ol mana hidhaatii hiikuuf dandeenyeerra jedhan Odaa Tarbii barruu fuula Twitter isaanii irratti maxxansaniin.
Waraanni Bilisummaa Oromoo Godina Shawaa Lixaa Aanaalee Gindabaratii fi Abunaa Gindabaratittis iddoowwan hedduu to’atee jiraachuu dubbatu jiraattonni. Gandoota Doggomaa Yagot fi Doggomaa Kibbii jedhamanitti ammoo waraana sirna aangoorra jiru tiksu waliin lola jabaatti jiraachuu himan. Miidhaan cimaan humnoota mootummaan bobbaase mudataa jira jedhu.
Dhimmuma kanaan walqabatee waraana gara Aanaa Gindabaratiin gaggeeffamaa jiruun injifannoowwan garaa garaa gonfataa jirra jedhan Dubbi Himaan Idil-addunyaa Waraana Bilisummaa Oromoo, Odaa Tarbii. Godina Arsii Aanaa Gololchaattis sochiin Waraana Bilisummaa Oromoo jabaatee itti fufuu eeruun, Waraanni keenya iddoowwan dabalataa to’achaa, fuulduratti tarkaanfataa jira jedhan.
Haleellaa Waraanni Bilisummaa Oromoo Aanaa Saasiggaafi iddoowwan birootti raawwachuu ibse kana ilaalchisuun hanga oduun kun qindaa’eetti gama sirna aangoorra jiruutiin wanti jedhame hin jiru.
Jiraattonni naannoo gama isaaniitiin yaada OMN’f kennaniin tarkaanfiin Waraanni Bilisummaa Oromoo fudhachuu ibse kun qabatamaadha jedhan. Caasaan bulchiinsa aanaas ta’e kan magaalaa, akkasumas humnoonni tikaa mootummaa Aanaa Saasiggaa gadi lakkisanii gara magaalaa Naqamteetti baqachuu dubbatu. Kibxata gara galgalaa waraanni mootummaa deebi’ee dhufuun, dhukaasni dhagahamaa akka tures ibsan.
Sochiin Waraana Bilisummaa Oromoo Aanaalee fi Gandoota Magaalaa Naqamteen wal daangessanitti jabaataa jiraachuu kan ibsan jiraattonni magaalaa Naqamtee gama isaaniin, waraanni mootummaa sochii Waraana Bilisummaa Oromoo kana to’achuuf hedduumminaan gara Naqamteetti bobbaafamee, magaalattii keessa buufatee jiraachuu himan.
Humnoonni mootummaa kibxatuma galgala magaalaa Naqamtee keessa oliif gadi naanna’uun shororkaa uumaa turaniiru, jiraattonni magaalattii walabaan akka hin sochoone gochuun cinatti, manneen dhugaatii muuziqaa akka hin banneef irra naanna’anii cufsiisaa turan jedhu yaada OMN’f kennaniin.
Mootummaan gara Lixaatti tajaajila Networkii cufuun sochii Waraana Bilisummaa Oromoo daangessuuf yaalaa jiraatus, itti milkaa’aa akka hin jirre odeeffannoon iddoo garaa garaatii nu qaqqabu nimul’isa. Hawaasni gama isaatiin rakkoo nageenyaan cinatti, Tajaajili Geejjibaa fi Tajaajilli Networkii irraa citee rakkoo keessa bu’ee jiraachuu ibsataa ture.
Saffisaan Waliif Dabarsaa Waliin Gahaa
Biyya Netherlands (Holland) keessatti Ambaasaaddara Bilxiginnaa kan ture obbo Million Samuel Motummaa Abiy (Ashaagree) ganuudhaan Baqatummaa gaafachuun beekameera.
Bilxiginnaan Gubbaaraahis caccabuu eegalteetti.
Gemeda J Mohammed
ODUU BBC AFAAN OROMOO Galgalaa fi VOA Afaan Oromoo, July 31-2020 Hayyu-dureen ABO Torban Lamaa…
Tigray, Ethiopia, Amhara in a state of total war, OLA, Sasiga (updated)